नेपालमा मार्क्सवादको बदनाम गर्यौं: डा.भट्टराई – Karnalisandesh
प्रकाशित मितिः ३ भाद्र २०७८, बिहीबार १३:१० August 19, 2021
काठमाडौँ। जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुरामले २१औं शताब्दिमा कार्ल मार्क्सवादको हुबहु लागू हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
बिहिबार राजधानिको कमलादि स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै १९ शताब्दिमै मार्क्सवादको कार्यभार पूरा भएको स्पष्ट पारेका छन्।
डा‍‍‍.भट्टराईले जनवादी केन्द्रीयताको नाममा नेपालका कम्युनिष्टहरूले २० वर्षसम्म आफैलाई टिका लगाउने र नेता बन्ने गरेको स्मरण गराए।
उनले भने, ‘समाजवाद र मार्क्सवादको बारेमा स्पष्ट खाका कोर्न नसकिएका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न बनेको हाे। वैचारिक रुपमा दिशा निर्देश दिन नसक्नु, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम, जनवादका बारेमा खाका कोर्न नसक्नु, भूमण्डलिय पूँजीवादको असरका विरुद्धमा कसरी लड्ने ? भनेर पनि हामी स्पष्ट भएनौं। तथापी हाम्रो देशको परिस्थिति अलि फरक छ।’
उनले अगाडि भने, ‘नेपालमा मार्क्सवादको बदनाम गर्न बाहेक हामीले केही गर्न सकेनौं। आज केपी ओलीले कम्युनिष्ट भन्नु हुन्छ, तर, उहाँको व्यवहार के छ? अरुले घाँस खाए भन्दैमा हामीले पनि घाँस खानु हुँदैन। हामीले विचारअनुसारको आचरण देखाउन सकेनौं त्यसकारण संकट आइलाग्यो।’
उनले भने, ‘संकट एउटा अवसर पनि हो। हामी ज्युउँदै छौं, हाम्रा कमजोरी सच्याउदै पछिल्लो विकसित विज्ञानलाई पछ्याउन सक्यौं भने हामी उन्नत समाजवादमा पुग्छौं। माधव नेपालले जुन समाजवादी बाटो रोज्नु भएको छ। अहिलेको आवश्यकता पनि यहि हो। पार्टीको स्वार्थभन्दामाथि उठेर समाजवादी बाटोमा हिड्न आवश्यक छ।’